မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်၏ မှတ်ချက်စကားအပေါ် “ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်ပြမှု” ဟု အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ပြောကြား - Xinhua News Agency
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၂၃ ရက်က ပြုံယမ်းမြို့တော်၌ ကျင်းပသည့် အခန်း ၁၀,၀၀၀ ပါ အိမ်ရာစီမံကိန်း ပန္နက်တင်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဇွန် ၂၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်၏ မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သော မှတ်ချက်စကားအပေါ် “ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အချက်ပြမှု” တစ်ခုအဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံက ယူဆကြောင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ဂျိတ်ခ်ဆူလီဗန် (Jake Sullivan) က တနင်္လာနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု နည်းလမ်းနှစ်ခု စလုံးအတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင်း ၊ လွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်သွားရန်မှာမူ အထူးသဖြင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်က ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု KCNA သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
“ ဒီအပတ်မှာ သူပြောခဲ့တဲ့စကားဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုလို့ ရှုမြင်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုအပေါ် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပိုပြီးတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမယ့် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုမဆို သူတို့ဘယ်လောက်ထိ လိုက်နာဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ABC ရုပ်သံ၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဆူလီဗန်က ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် နျူကလီးယားလုံးဝကင်းစင်ပပျောက်ရေး အဆုံးသတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အတူ ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူ ၎င်း၏ နျူကလီးယားအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ “ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ” အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဆူလီဗန်ကထပ်လောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အသစ်ခန့်အပ်လိုက်သော မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် Sung Kim သည် နျူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမေရိကန်-တောင်ကိုရီးယား-ဂျပန် သုံးနိုင်ငံ ပါဝင်သော လမ်းကြောင်းသုံးသွယ် အစည်းအဝေးတစ်ခုတက်ရောက်ရန် စနေနေ့က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးလ်မြို့တော်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့၏ မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ မူဝါဒပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြီးခဲ့သော ဧပြီလကုန်ပိုင်းက အလုံးစုံပြီးစီးခဲ့သည်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းကြောင်းများစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာမျှ မရရှိခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ဆိုသည်။
ကင်ဂျုံအန် နှင့် ယခင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်က စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် နျူကလီးယားလက်နက်အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေး နှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်အတွက် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံအကြား နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မည်သည့်သဘောတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာမျှမရရှိဘဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရသည့် ကင်ဂျုံအန် နှင့် ထရမ့်တို့၏ ဒုတိယအကြိမ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးကတည်းက ရပ်တံ့နေခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Sullivan says comments by DPRK leader “interesting signal”
WASHINGTON, June 20 (Xinhua) — The United States regarded the recent comments made by Kim Jong Un, top leader of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), as an “interesting signal,” National Security Adviser Jake Sullivan said on Sunday.
The DPRK leader said Thursday that his country should get prepared for both dialogue and confrontation with the United States, especially for confrontation, to protect the DPRK’s dignity and interests for independent development, according to the official Korean Central News Agency.
“His comments this week we regard as an interesting signal. And we will wait to see whether they are followed up with any kind of more direct communication to us aboutapotential path forward,” Sullivan said in an interview with ABC News.
He reaffirmed that the Biden administration is prepared to engage in “principled negotiations” with Pyongyang to deal with its nuclear program, with the ultimate objective of the complete denuclearization of the Korean Peninsula.
Photo provided by Korean Central News Agency (KCNA) on March 24, 2021 shows Kim Jong Un (L front), top leader of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), attending the groundbreaking ceremony ofaproject of 10,000 flats in Pyongyang, the DPRK, on March 23, 2021. (KCNA via Xinhua)
Related Topics:KimNorth KoreaXinhuamyanmarကင်ဂျုံအန်းမြောက်ကိုရီးယားအမေရိကန်